လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ ဆုဖလားကို စတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ၁၉၇၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းများ အပိုင်း (၁၀)
19 Jun 2018 . 4:53 AM
(၃)ကြိမ် ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလ်အသင်းကို ဂျူးမက်ရီဆုဖလားကို အပိုင်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး အီတလီ ပန်းပုဆရာ ဆယ်လ်ဘီယိုဂတ်ဇာနီရဲ့ ဖလားအသစ်နဲ့ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲလို့ နာမည်ပြောင်းလဲ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲလည်း ဖြစ်ခဲ့ပြီး အနောက်ဂျာမနီအသင်းက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲပုံစံအသစ်နဲ့ ပြောင်းလဲကျင်းပခဲ့ပြီး အုပ်စုအဆင့်ကို ပထမအဆင့်နဲ့ ဒုတိယအဆင့်ဆိုပြီး (၂)ဆင့် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ခြေစစ်ပွဲအောင် အသင်း (၁၆)သင်းကို (၄)သင်း (၄)အုပ်စုခွဲကာ ပထမအဆင့်အဖြစ် ကစားခဲ့ကြရပါတယ်။ အုပ်စုတစ်စုချင်းစီက အုပ်စုပထမနဲ့ ဒုတိယနေရာ ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ အသင်း (၈)သင်းကို (၄)သင်း (၂)အုပ်စုခွဲကာ ဒုတိယအဆင့်အဖြစ် ဆက်လက် ကစားခဲ့ရပါတယ်။
နယ်သာလန်အသင်းရဲ့ ကမ္ဘာကျော် ‘Total Football’ ကစားဟန်ကို စတင်မိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီး ဖျော်ဖြေမှု ပေးနိုင်တဲ့ ဘောလုံးကစားဟန်ကို ကမ္ဘာ့ဘောလုံးပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲအထိ အရောက်ပို့နိုင်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နယ်သာလန် ဂန္ထ၀င် ယိုဟန်ခရိုက်ဖ်ကို ပရိသတ်တွေ စတင်သိရှိခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ချီလီကစားသမား ကားလို့စ်ကတ်ဇာလီ အနီကတ်ပြသခံခဲ့ရပြီး ကမ္ဘာ့ဖလားသမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးအနီကတ် ပြခံရတဲ့ ကစားသမားလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်လုပွဲမှာတော့ အိမ်ရှင်အနောက်ဂျာမနီအသင်းက နယ်သာလန်အသင်းကို (၂-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူကာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ချန်ပီယံဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ နှစ်အလိုက် အပိုင်းဖြင့် နေ့စဉ်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း (၁၁)ကို နောက်ရက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် . . .
၁၉၇၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ မှတ်တမ်းအကျဉ်း
Host Country – West Germany
Dates – 13 June –7July (25 days)
Goals Scored – 97 (2.55 per match)
Attendance – 1,865,762 (49,099 per match)
Top Scorer(s) – Grzegorz Lato – Poland (7 goals)
Best Young Player – Władysław Żmuda (Poland)
Photo:FIFA.com, SI.com, Pinterest
ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးမြား အပိုငျး (၁၀)
(၃)ကွိမျ ခနျြပီယံဖွဈခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလျအသငျးကို ဂြူးမကျရီဆုဖလားကို အပိုငျပေးအပျခဲ့ပွီး အီတလီ ပနျးပုဆရာ ဆယျလျဘီယိုဂတျဇာနီရဲ့ ဖလားအသဈနဲ့ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖီဖာကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲလို့ နာမညျပွောငျးလဲ ကငျြးပခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲလညျး ဖွဈခဲ့ပွီး အနောကျဂြာမနီအသငျးက အိမျရှငျအဖွဈ လကျခံကငျြးပခဲ့ပါတယျ။ ပွိုငျပှဲပုံစံအသဈနဲ့ ပွောငျးလဲကငျြးပခဲ့ပွီး အုပျစုအဆငျ့ကို ပထမအဆငျ့နဲ့ ဒုတိယအဆငျ့ဆိုပွီး (၂)ဆငျ့ ယှဉျပွိုငျခဲ့ကွရပါတယျ။ ခွစေဈပှဲအောငျ အသငျး (၁၆)သငျးကို (၄)သငျး (၄)အုပျစုခှဲကာ ပထမအဆငျ့အဖွဈ ကစားခဲ့ကွရပါတယျ။ အုပျစုတဈစုခငျြးစီက အုပျစုပထမနဲ့ ဒုတိယနရော ရယူနိုငျခဲ့တဲ့ အသငျး (၈)သငျးကို (၄)သငျး (၂)အုပျစုခှဲကာ ဒုတိယအဆငျ့အဖွဈ ဆကျလကျ ကစားခဲ့ရပါတယျ။
နယျသာလနျအသငျးရဲ့ ကမ်ဘာကြျော ‘Total Football’ ကစားဟနျကို စတငျမိတျဆကျနိုငျခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲဖွဈပွီး ဖြျောဖွမှေု ပေးနိုငျတဲ့ ဘောလုံးကစားဟနျကို ကမ်ဘာ့ဘောလုံးပရိသတျတှရေဲ့ ရငျထဲအထိ အရောကျပို့နိုငျခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲလညျး ဖွဈပါတယျ။ နယျသာလနျ ဂန်ထဝငျ ယိုဟနျခရိုကျဖျကို ပရိသတျတှေ စတငျသိရှိခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒီပွိုငျပှဲမှာ ခြီလီကစားသမား ကားလို့ဈကတျဇာလီ အနီကတျပွသခံခဲ့ရပွီး ကမ်ဘာ့ဖလားသမိုငျးတဈလြှောကျ ပထမဆုံးအနီကတျ ပွခံရတဲ့ ကစားသမားလညျး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဗိုလျလုပှဲမှာတော့ အိမျရှငျအနောကျဂြာမနီအသငျးက နယျသာလနျအသငျးကို (၂-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုငျယူကာ ဒုတိယအကွိမျမွောကျ ခနျြပီယံဆုကို ဆှတျခူးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးတှကေို ပွိုငျပှဲကငျြးပခဲ့တဲ့ နှဈအလိုကျ အပိုငျးဖွငျ့ နစေ့ဉျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အပိုငျး (၁၁)ကို နောကျရကျမှာ ဆကျလကျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ . . .
၁၉၇၄ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ မှတျတမျးအကဉျြး